SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: SSEO နှင့် SWAN အဖွဲ့ တို့က မြင့်တချီ ခန်းတလှည့် အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ
SSEO နှင့် SWAN အဖွဲ့ တို့က မြင့်တချီ ခန်းတလှည့် အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်များ ကလပ်တွင် ရှမ်းသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အဖွဲ့ SSEO နှင့် ရှမ်းအမျိုးသမီးရေးရာ ဆက်သွယ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ SWAN တို့ကပူးပေါင်း၍ မြင့်တချီ ခန်းတလှည့် အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ယနေ့ ထုတ်ဝေလိုက်သည်။Shan Sapawa Enviromental Organisation နှင့် Shan Women’s ActionNetwork တို့က ပူးပေါင်း၍ စာမျက်နှာ ၂၀ ပါရှိသော မြင့်တချီ ခန်းတလှည့် အစီရင်ခံစာကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ထိုင်းနှင့် တရုတ်ဘာသာ တို့ ဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။တရုတ်မြန်မာနယ် နိမိတ်ရွှေလီမြစ်၏ အထက်ပိုင်း ၃၀ကီလိုမီတာခန့် အကွာ၊ တရုတ်နိုင်ငံ လောင်ဂျန်း မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် ဆည်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းဒေအတွင်း နေထိုင်ကြသည့် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ အထူးထိခိုက် နစ်နာမှုများ ရှိနေကြောင်း ရွာပေါင်း ၂၀ မှ ရွာသူရွာသားများကို မေးမြန်း သုသေတနပြု၍ ဤအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ရှမ်းသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုစိုင်းစိုင်းက “တရုတ်ပြည်မှ လောင်ဂျန်း မြစ်ပေါ်မှာ ဆည်ဆောက်ထားတာ ၁၀နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။ ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်း ဆောက်နေ ကြပြီ။ ဒီလိုဆည်ကြီးတွေ တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအတွက် တစ်စုံတစ်ခု အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိပဲ အပြစ်ပဲရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ဒေသခံတွေမှာ ရေဘယ်အချိန် မြင့်တက် လာမလဲ၊ ဘယ်အချိန် ရေကျသွားမလဲ အတိအကျမသိဘူး ဆိုတော့ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းတုန်း ရေတွေ ဖေါက်ချလိုက်တော့ အကုန်မြုပ်ကုန်တယ်။ အထိတ်တလန့် ရပ်တည်နေရတယ်” ဟု ပြောသည်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှ အဆိုပါဆည်တွင် ရေချိန်မှတ်ပိုလျှင် ရေကိုဖေါက်ထုတ်လိုက်ပြီး ရေချိန်မှတ် မပြည်သေးပါက ရေတံခါးများကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ဓါတ်ပုံ အထောက်အထောက်များနှင့် အတူ ရွှေလီမြစ်၏ ၀ဲယာတွင် ရှိသော ရွာပေါင်း ၂၀မှ ကူးတို့ လုပ်ငန်းကို အားကိုး အားထားပြု လုပ်ကိုင်စားကြသော လူဦးရေ ၁၅၇၅၀ ခန့် တို့ မှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ တပြိုင်တည်းတွင် တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် မူဆယ်မြို့ မှ လူဦးရေ သုံးသောင်းခန့်တို့လည်း အဆိုပါ ကူးတို့ လုပ်ငန်းအပေါ်တွင် မှီတည် လုပ်ကိုင်ကြရကြောင်း ဆိုသည်။SAWN အဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ နန်းချန်တောင်းက “ မြန်မာအစိုးရရော၊ တရုတ်အစိုးရပါ မြစ်ပေါ်မှာ ရေကာတာတွေ တည်ဆောက်တဲ့အတွက် ပေါက်ပေါ်နေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လျစ်လျှူမရှုသင့်ဘူး။ ဒီရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်းကို လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေ တကယ် ဒုက္ခရောက်နေတာတွေကို ဘယ်လို ကူညီဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ အာဆီယံဒေသတွင်းက လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အင်ဂျီအိုတွေ ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့မှ ကူညီ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီးတော့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ရေကာတာ တည်ဆောက်နေခြင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် သံလွင်မြစ်တို့တွင် တည်ဆောက်နေမှုများတို့မှ ဆိုးကျိုး ဖြစ်ထွန်းပေါ်နေမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် တစ်ခုကိုသာ မကြည့်ပဲ လောင်ဂျန်းမြစ်၊ မဲခေါင်မြစ်၊ သံလွင်မြစ်စသော မြစ်များအပေါ် အမှီသဟဲပြု နေကြသော လူမှု အသိုင်းအ၀ိုင်းများ ဇီဝသဘာဝ ပျက်စီးလာမှုများကို အထူးဂရုပြုသင့်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ SWAN အဖွဲ့က ပညာရေး တာဝန်ခံ မနန်းမွန်းကိန် က “မြန်မာအစိုးရနဲ့ တရုတ်အစိုးရတို့က ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့မှ သဘာဝအတိုင်း ရေတွေ စီဆင်းနိုင်အောင် ပြန်လည်စီစစ်ပြီးတော့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှ ဖြစ်မယ်။ လူထုတွေက ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ သူတို့ ခံစားနေရတာကို ကမ္ဘာကသိအောင် တင်ပြပေးဖို့ ကျမတို့ကို အကူအညီ တောင်းတဲ့အတွက် ခုလို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ပြောဆိုသွားသည်။တရုတ်နိုင်ငံက တည်ဆောက်နေသော ရေကာတာများကြောင့် မဲခေါင်မြစ် အောက်ဘက်ပိုင်းရှိ နယ်မြေများ သို့ သက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာမှ အချေအတင် ပြောဆိုမှုများ တစတစ တိုးများ လာနေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ၄င်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရှိ သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် ရေကာတာ ၁၃ ခု တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။
ကိုကျော်သောင်းမှ ပေးပို့ပါသည်။ Posted by
cac(Burma) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် Statements in english
နိုင်ငံရေး စာအုပ်များ အွန်လိုင်းမှာဖတ်ရန် အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက် ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုဉ်းခြင်း ၊ ညီမျှမှု ဆိတ်သုဉ်းခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ
၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တမ်း -ခင်ကျော်ဟန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှုရက်စွဲ မှတ်တမ်းများ ၁၉၈၈ -၂၀၀၂ -ABSDF
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ၏ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ၁၉၉၈-၂၀၀၃ -ခင်ကျော်ဟန် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အဆိုပြုချက်
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် လူကြီးများ၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု အတွေ့အကြုံများ ကြောက်ရွံ့ခြင်း မှ လွတ်ကင်းရေး နှင့် အခြားစာတမ်းများ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
U Win Tin “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” ဗမာ့ကြယ်-ကွန်ယက်စာအုပ်စင်ရဲ့ အွန်လိုင်း စာအုပ်များကို မိတ်ဆွေများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်မျှဝေပေးခြင်းပါ ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက်စာအုပ်စင် – စာအုပ်စာရင်း ကလျာဆောင်းဆည်းဆာ
ညီပုလေးလူအ အိပ်မက် ၀တ္ထုတိုများ
နတ်နွယ်ကမ္ဘာ့စာပေ တစေ့တစောင်း ဒက်ဇယ်လာ
မင်းသိင်္ခ“မ”တတ်ပါ့ ၀တ္ထုတို ၃ ပုဒ်
သိန်းဖေမြင့်၁၉၃၀ တ၀ိုက် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း
ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်Her infinite variety & other stories (အင်္ဂလိပ်)
နိုင်ငံရေးနှင့်သမိုင်းမောင်ထင် _ ဗမာ့နိုင်ငံရေးသုခမိန်
ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့2(06/27) ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့ ၃ (06/27) ကံချွန် - အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် (Nov 11, 2008) ကံချွန် - မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း (Nov 11, 2008) ကံချွန် -ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ (Nov 11,2008) ကံချွန် - ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (Nov 11,2008) ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ (Nov 11,2008) ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ (Nov 11,2008) ကျော်ဝင်း - စိန်ခေါ်ကြသူများ(06/28) ချစ်စံဝင်း - တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကိုမောင်သွားထားလေမလား (07/29) ချစ်ဦးညို - ရုက္ခစိုးနဲ့ အခြား ပြိတ္တာများ (08/06) ချစ်ဦးညို - ရာဇကုမာရ (08/06) ချစ်ဦးညို-၀ိဇိတာဝီ (08/06) ချစ်ဦးညို - ၀ိသာခါနှင့်သီတာ (08/06) ချစ်ဦးညို - စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ (08/06) ချစ်ဦးညို - ရှင်စောပု (08/06) ချစ်ဦးညို - မလေးမဏိစန္ဒာ (08/06) ချစ်ဦးညို -လင်္ကာဒီပချစ်သူ (08/06) ချစ်ဦးညို - လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း (08/06) ချစ်ဦးညို - နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် (08/06) ချစ်ဦးညို - ချစ်သောပါဒဧကရီ (08/06) ချစ်ဦးညို - ချစ်သူမင်းနန္ဒာ (08/06) ချစ်ဦးညို-ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (08/06) ချစ်ဦးညို - ယာဇ (08/06) ချစ်ဦးညို - စာမရီသို့ထူးထူးခြားခြား (08/06) ချစ်ဦးညို - မဏိစန္ဒာဥဒါန်း (08/06) ချစ်ဦးညို - မဟာသေနာပတိ.(08/06) ချစ်ဦးညို - အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ (08/06) ချစ်ဦးညို - သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ (08/06) ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် (06/28) ပြည့်ပိုင်မူးအိမ် - ကျူးပစ်ဒ်၏ရင်ဖွင့်မြှား ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ကုန်ကြမ်း (0ct 10, 2008) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ပန်းနုရောက်ပြကွက်ထဲက ကကြိုးလှတဲ့သတို့သမီး (oct 16, 2008) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - သတ္တမမြောက်နတ်သမီး ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ခြံခုန်တဲ့ကြယ် ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - အချစ်နဲ့နက္ခတ် ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - နွေရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ချစ်သူကိုတိုင် သွန်းခတ်ခဲ့သောသစ်သီးများ ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် -မိုးကောင်းကင် လှည့်စားတဲ့ကြယ် ( oct 16, 2008 ) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - အချစ်ကိုကြက်ခြေမခတ်ကြေး ( oct 16, 2008 ) မဟာဆွေ - အင်္ကျီပါး (Nov 28, 2008) မဟာဆွေ - သူပုန်ကြီး ( Nov 28, 2008) မဟာဆွေ - စာရေးကြီး (Nov 28, 2009) မင်းခိုက်စိုးစန် -ဖိုးသူတော်ပြောသောပုံပြင် မင်းခိုက်စိုးစန် - ချောင်းကြည်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည (06/27) မင်းခိုက်စိုးစံ - စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်(08/19) မင်းခိုက်စိုးစံ - ခေတ်တစ်ခု၏အစ အဓိပါယ်တစ်ခု၏အဆုံး (08/19) မင်းခိုက်စိုးစံ - သုည (08/19) မင်းခိုက်စိုးစံ - ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် လမ်းဆုံ (08/19) မင်းခိုက်စိုးစံ - ကော်ဖီည (08/19) မင်းခိုက်စိုးစန် - ကလေးအတွေး (08/19) မင်းလူ - သင်္ခါရများ မင်းလူ - ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ (06/26) မင်းလူ - အချစ်လို့အဓိပါယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ (06/26) မင်းလူ - ငိုအားနဲ့ရယ်အား (06/27) မင်းလူ - ခြေစစ်ပွဲများ - ၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ - အဖွားကြီးသုံးယောက်နဲ့စကားပြောခြင်း (၀တ္ထုတို) ( 06/26) မင်းလူ - ဒေ၀တာမြို့တော်-၀တ္ထုတိုို (06/27) မင်းလူ-စိန်အလွမ်း (06/27) မင်းလူ - အီးကော်လံ-၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ - လေထန်ဖုန်း-၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ - ခြေစစ်ပွဲများ - ၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ - ညာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ-၀တ္ထုတို(06/27) မင်းလူ - ဖူးစာရှင်ကိုရွေးတော့မည်-၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ-ပြတိုက်ထဲက ပြဇာတ် (06/27) မင်းလူ - ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ် - ၀တ္ထုတို (06/27) မင်းလူ - ချစ်မြှားရှင်အစ ချစ်မြှားရှင်အဆုံး (Nov 28, 2008) မင်းသိခ်-မြနန်းနွယ် (07/20) မင်းသိခ်-မိုးနဲ့မြေ (07/20) မင်းသိင်္ခ - မ "တတ်ပါ့" (07/20) မင်းသိခ်-မနောမရမြသက်လည် (07/20) မင်းသိခ်-မနောမရကိုပီတာ (07/20) မင်းသိင်္ခ - မြိုင်ဟေ၀န် (07/24) မင်းသိင်္ခ - ပုဏ္ဏားဘကွန်း အပိုင်း၁ အပိုင်း ၂ (07/24) မင်းသိင်္ခ - တစ်ပွဲစားဦးနှော အပါအ၀င် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/24) မင်းသိင်္ခ - မိုးနဲ့အတူ (07/24) မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မြိုင်မဟာမမြလေး (07/24) မင်းသိင်္ခ -ပေတလူ ( 07/24) မင်းသိင်္ခ - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂ (07/24) မင်းသိင်္ခ - မအောင်ရင် ( 07/24) မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ ပျားဆွဲသောမုတ်ဆိတ် (07/24) မင်းသိခ်-ဘမျိုးဘိုးတူဘယ်သ န်ဘမှန် (07/20) (pdf) မင်းသိခ် - မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော (Nov 28, 2008) မြသန်းတင့် - လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့်၊သက်အောင် - သမိုင်းစကားပန်းစကားနှင့် အခြားရသစာတမ်းများ (07/29)ဲမြသန်းတင့် - လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့် - ဂျူပီတာဖိုက် (07/08) မြသန်းတင့် - မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ (07/29) မြသန်းတင့် - ကြာညိုနံသင်းသောရေ၀တီမ (07/29) မြသန်းတင့် - ဓားတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည် (07/29) မြသန်းတင့် မှောင်မိုက်မှာငို (ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့် - တိမ်းရှောင်သူ (ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့် - ၏ကရီဖွားစော (ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့် -မှော်ရုံတော်မှာ မောလှပြီ(ဘာသာပြန်) (07/29) မြသန်းတင့် - စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (ဘာသာပြန်) (07/08)ဲမြသန်းသင့် - လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်း ကြည့်ခြင်း (07/29)ဲမြသန်းတသင့် - သြဂုတ်တစ္ဆေ နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (07/29) မြသန်းတင့် - ရေပွက်ပမာ .. (07/29) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။(06/28) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် (06/27) တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန် ကဗျာများ ( 07/15) တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ပညာရဲ့ သဘော (07/16) တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည် (07/16) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ် (Nov 28, 2008) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် (Nov 28, 2009) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း (Nov 28, 2008) တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း တာရာမင်းဝေ-ကျွန်တော်နဲ့ဧဒ င်ကခြေသည် တာရာမင်းဝေ အရှေမြို့ ရိုးကမိုးရေစက်များ တာရာမင်းဝေ-ရွှေဖိနပ်မှာအစ မ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး တာရာမင်းဝေ - ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ တာရာမင်းဝေ-ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း တာရာမင်းဝေ-ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက်. တာရာမင်းဝေ-မှော်ဆရာရဲ့ ကျောင်းစာအုပ် တာ၇ာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ တာရာမင်းဝေ သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင် ခွင့်ပြုမည တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ေ ကျးမှု တာရာမင်းဝေ ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ (oct 11, 2008) တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် (oct 11, 2008) တာရာမင်းဝေ - ရှူး (oct 11, 2008) တာရာမင်းဝေ - သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ (oct 11, 2008) တာရာမင်းဝေ -ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း (oct 11, 2008) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရုပ်ထုကျိန်စာ (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရွှေစင်နတ်ဘုရား (ဘာသာပြန်) (09/03)\_ ဒဂုန်ရွှေမျှား -ရောဘ့်ဘင်ဆင်ကရူဆိုး (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား -သုံးဖော်ညီနောင် (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - စောရသက်ပြင်း (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ငယ်ကချစ်အနှစ်တရာ (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား -လုသစ်ပင်နှင့် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဝတ္ထုများ (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကျွန်းမင်းသား (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်သူ (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကဗလာနီအောက်ဝယ် (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ထောင်မင်းသား ဦးဘိုးထော် (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင် (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ချစ်သွေးဧကရီ(09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - ဘ၀မုန်တိုင်း (09/03) ဒဂုန်ရွှေမျှား - မေ၀ါ၏ကလဲံ့စား (09/03) နန္ဒ - လေးရူးသုန်သုန် (ဘာသာပြန်) (07/29) နီကိုရဲ - ဇွတ် နီကိုရဲ - ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ နီကိုရဲ - ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း (06/27) နီကိုရဲ - ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ (06/27) နီကိုရဲ - နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။ (07/08) နီကိုရဲ - လှည့်စား (07/08) နီကိုရဲ - အိုးလေး - (oct 11, 2008) နတ်နွယ် - ကမ္ဘာစာပေ တစေ့တစောင်း (08/28) နတ်နွယ် - ရတနာလှိုဏ်ဂူ (ဘာသာပြန်) (08/28) နတ်နွယ် - မိုဗစ်ဗီးယား၏ အတိုင်းအတာနဲ့ အခြားဝတ္ထုတိုများ (08/28) နတ်နွယ် - ရေအောက်တစ္ဆေ (ဘာသာပြန်) နတ်နွယ် - အလည်လာတဲ့မိန်းကလေးရယ် (08/28) နတ်နွယ် - မင်းမှာသစ္စာလူမှာကတိ (ဘာသာပြန်) (08/28) နတ်နွယ် - ဒက်ဇယ်လာ (08/28) နွမ်ဂျာသိုင်း - တစ်မျိုးညာနွဲ့ သွေမဖယ် ပိုးပါနဲ့မေရယ် (Nov 28, 2008) နွမ်ဂျာသိုင်း - နွေလေကညင်း (Nov 28, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - ဆော်လမွန်သိုက် (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက် အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ အပိုင်း၃ (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - ဆင်စွယ်မင်းသမီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - ရတနာပုံ (Nov 25,2008) ရွှေဥဒေါင်း - အတွေးအမြင်နှင့် ရှူထောင့် (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့ အတွေးအခေါ်များ (Nov 25, 2008) ရွှေဥဒေါင်း - မြသက်မော် (Nov 25, 2008) လယ်တွင်းသားစောချစ် - ပန်းများကိုမွေးစေသူ (07/04) ၀တ္ထုတိုများ - ဆရာစုံ (06/26) ဝေမူးသွင် - ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့ကြယ် ( oct 09, 2008 ) ဝေမူးသွင် - စိတ်ကောက်နတ်သမီး (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - ကျူးပစ်ဒ်ကိုတိုင်မသိတဲ့ မြှားတစ်စင်းအကြောင်း (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - သံယောဇဉ်ဖတ်စာ (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - လူပျောက်ကြော်ုငြာ (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - တစ်ခါတစ်ရံများ (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြ င် (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - စက္ကုပန်းတွေရဲ့သီချင်း (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - အသဲကွဲလူရွင်တော် (oct 09,2008) ဝေမူးသွင် - အဆင့်မြင့်ချည်တိုင် (oct 09,2008) သုခ - ဒီဆောင်းဟေမာန် (Nov 28,2008) သုခ - ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား (13 January, 2009) သိပ္ပံမောင်ဝ - အဟိတ်…၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ (06/28) သိပွံမောင်ဝ - စစ်အတွင်းနေစဉ်မှတ်တမ်း (Nov 28, 2009) အကြည်တော် - စွယ်စုံလက်ဆောင် အကြည်တော် - လှအိုးကွဲ အကြည်တော် - သံသရာရထား အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည (06/27) အကြည်တော်-ကျွန်တော်ချစ်သူပြောပြတဲ့သူချစ်သူအကြောင်း (06/27) အကြည်တော် - ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ် (06/27) အကြည်တော် - သဲလှည်း(06/27) အကြည်တော် - အိမ် အပိုင်း(၁) ( 06/27) အကြည်တော် - အိမ် အပိုင်း(၂) -(06/27) အကြည်တော် - အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့် … (07/04) အကြည်တော် - ရီတန်းအောဖ့်ဘီလုး (07/05) အကြည်တော် - ကျွန်တော်ထောင်းသောပေါင်များ (09/07) အကြည်တော် - ပိုးကောင်များ (09/07) အကြည်တော် - မိုးတိ်မ်ပုံပြင် (09/07) အကြည်တော် -အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉ (09/07) အကြည်တော် - တောသားကြီး (09/07) အကြည်တော် - တခါက .. ငယ်ငယ်လေးတွေ (09/07) အကြည်တော် - ကဝေပျိုနိဒါန်း (09/07) အကြည်တော် - ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် (09/07) အကြည်တော် - ပြတ်ထွက်သွားသော ကျောရိုးဆစ်လေးများ (09/07) အကြည်တော် - နတ်နေကိုင်း (09/07) အကြည်တော် - ရွှေမိုးသည်း (09/07) အကြည်တော် - ခင်မှုန်မင်္ဂလာဆောင် (09/07) အကြည်တော် - ဟဒယတက်ကျမ်း (09/07) အကြည်တော် - ဇော်က . ကနေသည် (09/07) အကြည်တော် - နတ်ပြည် နံနက်ခင်း (09/07) အကြည်တော် - ဘီလူး (09/21) အထင်ကရ - မင်းနဲ့ကိုယ် (Nov 28, 2008) အထင်ကရ - ကောင်လေးချစ်တဲ့သူ (Nov 28, 2008) အထင်ကရ - သူဖန်ဆန်းတဲ့သင်္ကြန် (Nov 28, 2009) အီကြာကွေး - တွေ့ရကြုံရရှတတလေးတွေ (06/30) အီကြာကွေး - နတ်ရူးတို့ကြောင်နိုင်ပါပေ့ (06/30)
ကလျာ - ဆောင်းဆည်းဆာ(Dec 23, 2008) ကြည်အေး - မိ(06/28) ကြည်အေး - အပြင်ကလူ(06/28) ကြည်အေး - နွမ်းလျအိမ်ပြန် (Dec 23, 2008) ကြည်အေး - ကျွန်မပညာသည် (Dec 23, 2008) ဒဂုန်တာရာ + ကြည်အေး - စမ်းမြညတစ်ည (Dec 23, 2008) ခင်ခင်ထူး - ဆံရစ်ဝိုင်း ၀တ္ထုတိုများ (Dec 23, 2008) ခင်မျိူးချစ် - ကိုင်းပြောလိုက်စမ်းကွယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ (Dec 23, 2008) ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း - ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ (06/30) ခင်ဆွေဦး - ဒို့တိုင်ဌာနီ (Dec 23, 2008) ခင်နှင်းယု - လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး (Dec 23, 2008) ခင်နှင်းယု - မွှေး (Dec 23, 2008) ခင်နှင်းယု - ဘယ်လိုသောအကြောင်းကြောင့်( Dec 23, 2008) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - သွေး (07/04) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မုန်း၍မဟူ (07/04) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - အဖြူ (၀တ္ထုတို) (Nov 28, 2008) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မေ့အိမ်မက် (Dec 23, 2008) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - ပျိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မိုး( ၀တ္ထုတို)(Dec 23, 2008) ဂျူး - ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့ ဂျူး - လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာ ဂျူး - ကံကြမာကိုမယုံကြသူများ ဂျူး - ကျွန်မ၏သစ်ပင် (06/30) ဂျူး -ကြယ်ကြွေတို့အတောင်ပံ (06/30) ဂျူး - ကျွန်မချစ်တြဲ့မို့တစ်မြို့ (06/31) ဂျူး - ချစ်သူရေးတဲ့ကျွန်မ၏ည (06/31) ဂျူး - မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် (06/30) ဂျူး - ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်ြး ဖူ (06/30) ဂျူး"ဆဲတတ်သူများနှင့် တစ်ညနေ" ဂျူး- ကျွန်မတို့မိန်းမတွေ - ၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ရဲရင့်သော နှလုံးသား-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - တွေ့ချင်လှပြီ-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျုး - အ၀ါရောင်ရထား (၀တ္ထုတို) (06/30) ဂျူး -ရေမျောသီး - ၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ဖျားနေတဲ့မြို့-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - နာမည်နဲ့အသက်-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး -မိန်းမနှစ်ယောက်-၀တ္ထုတို( 06/30) ဂျူး - အနှပညာရှင်များနဲ့စံလက်ရာများ - ၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - လေထဲမှာကပျံဝဲကျသူများ (၀တ္ထုတို) (06/30) ဂျူး - ကောင်းကင်မပါသောည (၀တ္ထုတို) (06/30) ဂျူး - သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို) ( ဂျူး -မြရဲ့လ-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး -မတော်တရော်-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး — ပြတင်းပေါက်-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ဘ၀ဇာတ်စရာ (၀တ္ထုတိုများ) (06/30) ဂျူး - ငါးမျှားခြင်း - ၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - လူနဲ့ကြိုး - ၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ရေမျောသီ-၀တ္ထုတို (06/30) ဂျူး - ၀တ္ထုတိုများ (06/30) ဂျူး — ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ (Dec 23, 2008) ဂျူး - ရွက်လှေများ (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008) ဂျူး - ပင်လယ်နဲ့တူသောမိန်းမများ (Dec 23, 2008) စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) - နေပန်းပွင့်ရဲ့ အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ် (Dec 23, 2008) စိုးမြတ်သူဇာ - feeling 35 (06/30) စိုးမြတ်သူဇာ - အနားသတ်သစ္စာ (Nov 28,2008) ဆွေဆွေအောင် - လွယ်အိတ်ကလေး (Dec 23, 2008) ဆွေဆွေအောင် - လူညာကြီး (Dec 23, 2008) ညိုနှင်းအိမ် - အိမ်မက်ပန်း အလွမ်းနှင်းဆီ (Dec 23, 2008) ပုညခင်- ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မူ(Nov 11,2008) ပုညခင်- ကြယ်တစ်ပွင့်နဲ့ စံပယ်ဖြူ (Nov 11,2008) ပုညခင်- လျှိူဝှက်တိတ်ဆိတ်သော (Nov 11,2008) ပုညခင်- အချစ်နဲ့ကကြိုး (Nov 11,2008) ပုညခင်- ညခင်းရဲ့ လမင်း(Nov 11,2008) ပုညခင်- ကဗျာမမှီ (Nov 11,2008) ပုညခင်- ချစ်သူရှိတဲ့မိန်းမ (Nov 11,2008) မချိူမော်+ချစ်စံဝင်း - ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ (Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ် မစန္ဒာ - ငယ်သူမို့မသိပါ မစန္ဒာ -န က်ဖြန်ခါ (07/08) မစန္ဒာ - တိမ်ဖုံးလို့လမသာ..(07/08) မစန္ဒာ - စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀ (07/08) မစန္ဒာ - ဂျီဟောသူ (07/08/08) မစန္ဒာ - ဆံဌဂံ(Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - ပန်းပွင့်ခရေ(Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - ပုစ္ဆာ (Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - နှင်းဆီ(Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၇ (Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၄(Dec 23, 2008) မစန္ဒာ - အရိပ်(Dec 23, 2008) မဦး - ပန်းပွင့်မျက်နှာ လိပ်ပြာနှုတ်ခမ်း (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008) မိုးငြိမ်းဧ နွေနေအောက်မှာ .. ကြွေ(Dec 23, 2008) မိုးမိုး(အင်းယျား) - စိန်တစ်ပွင့် မိုးမိုး(အင်းလျား) - ၀တ္တုတိုများ ၄ (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - မေတ္တာကမ်းနားအချစ်သစ်ပင် (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - ဝေဒနာကြာပွင့်နီ(Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - ညီမလေးက အချစ်ကိုကိုးကွယ်သတဲ့လား (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - မသုဓမ္မစာရီ (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) ဘယ်သူလာကူပါမယ် (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - မှတစ်ဆင့် (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - ဂျိူး (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - ပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတ၀ါး (Nov 28,2009) မိုးမိုး(အင်းလျား) - မြူမှော
မောက်ကလေးကို တချက်နှိပ်လိုက်ရင် ငါးစာကျွေးလို့ရပါတယ်။ Sombody Need You Appeal for Cyclone Nargis Victims in Burma (Myanmar)
Help Save The Loxahatchee National Wildlife Refuge PETITION
Children in Nigeria starving to death, says UN
US Supreme Court to Take Up Hospital Workers' Pension Dispute
Expert: Buzzfeed story on 'Fixer Upper' starsa'hit piece' - Fox News
American and Sri Lankan Experts Gather to Unleash Sri Lanka’s Trade Potential
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းစာသင်ကျောင်း (၃)ကျောင်းအတွက် ပထမအကြိမ် အလှမယ်နှင့် အလှမောင်ရွေးပွဲကျင်းပ
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆)
What took place in Sept.’07, when the military junta in Burma crushed the peaceful demonstrations by the Buddhist monks was unprecedented. Not only in Burma’s history, but also in the context of the cultural history of the country as well.
Although monks in the past, during the colonial period of the British, and the Japanese occupation in 1942-45, were killed because of their involvement in political matters, never in the history of the Burmese people, have so many Buddhist monks been brutally killed, beaten, and shown absolute disregard by those in power who are, and call themselves Buddhist. It isasad and dark chapter of Burma’s history indeed.
Monks who were helped by leaders and prominent members of other faiths, such as, Muslem, Christian, Sikh, and Hindu, were also threatened by the military for rendering assistance to the Buddhist monks. Reports about prominent members of other faiths who are also being harassed and intimidated by the regime continually are frequent amongst the communities, within and outside the country.
This atrocious situation is the reality today in Burma today. That is why the monks and the organizing committee of the Saffron Robe People’s Movement would like to urge leaders and adherents of the Buddhist faith, and all other faiths: Moslem, Christian, Hindu, and Sikh to truly see what the military regime in Burma is really like. It isadegrading and destructive military regime towards all religious faiths is without doubtachilling and tragic fact.
Therefore, members of all faiths within and outside the country, we seek your help in this struggle; to rid Burma ofamilitary regime that has descended to the lowest of the low; for killing monks who dared to call for change for the better of the peoples of Burma.
The organizing committee for the Saffron Robe People’s Movement of Burma.
Dated 26 DEC.2007
For more information contact to;
THE EXCOMMMUNICATIVE BOYCOTT
Any could be boycotted towards excommunication if the following eight attributes described in Vinaya Scriptures IV , page 262 , Silavar Text Commentary5are met:
Effort are made to deny four essential things _ i.e. monastery ,robes ,food , medicine –to monks
Effort are made to endanger the lives of monks or reduce the numbers the them
Effort are made to deny place of residence to monks
Ten kinds of abusive lanquage are used against monks
Effort are made to sow dissension among monks
Slander or scorn is made upon buddha’s infinite feat
Slander or scorn is made upon Dhamma’s infinite faculty
Slander or scorn is made upon Sangha’ s infinite undertaking
“I consent to perform excommunicative boycott aganist any lay devotee who endaevors to fullfill any one above eight attributes, Budda said in Sulavar Holy Text.
Boycotting does not imply placing the amls bowl upside –dwn ; it means not accepting four essential things donated by lay people who are being boycotted.
The proscribing monks also advocate the boycotting act to other monks in the world .The purpose of al this is to make those lay Buddihist who offend noble and good monks realize their mistake and become well-mannered and civilized. If those lay people regret their misdeeds, really become good-mannered and respectful ,and apologize three times,boycott would be called off.
SSEO နှင့် SWAN အဖွဲ့ တို့က မြင့်တချီ ခန်းတလှည့် အ...